Xiddigta Gemini: astaamaha, goobta iyo quraafaadka | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 02/06/2021 10:46 | Astronomy
Maanta waxaan ka hadlaynaa mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan ee loo yaqaan 'zodiac' iyada oo ay ugu wacan tahay habboonaanta iyo goobta. Waxay ku saabsan tahay xiddigta gemini. Waxay ku taal agagaarka 30-30 ° waqooyi-galbeed ee Orion. Orion waa xiddigta ugu caansan samada uguna cajaa’ibka badan, sidaa darteed Gemini dhib badan kuma ahan in la arko. Waxay ku leedahay sheekooyin fara badan sheekooyinka Griiga oo mudan in la ogaado.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato astaamaha, goobta iyo sheekooyinka halyeeyada Gemini.
2 Goobta iyo halabuurka xiddigta Gemini
3 Quraafaadka xiddigiska Gemini
5 Kooxaha Xidigaha
Waa xiddigta saddexaad ee ugu habboon xiddigiska. Waxay ku taal qiyaastii 30 darajo waqooyi-galbeed ee Orion. Orion waa xiddigta ugu cadcad ee samada iyo xiddigta ugu cajiibka badan. Waxaa loo yaqaan "ugaarsada cosmic." Gemini waxaa lagu gartaa koox aad u tiro badan oo xiddigo ah oo umuuqda in ay isku dhawyihiin ama iskaga dhawyihiin aragtida iyo aragtida aadanaha, in kasta oo xaqiiqda murugada lihi ay tahay in ay dhowr sano oo iftiin ah u dhexeeyaan ama aysan isku xirnaynba
Cirbixiyeennadii hore waxay go’aansadeen inay xiddigahaas ku xiraan khadado male awaal ah. Sidan ayaa ay ku abuureen qaabab kala duwan, walxo iyo sawirro, waxayna u bixiyeen magacyada xiddigaha, waana sababta Gemini uu ugu dhashay calaamadda kala-goysyada.
Waxaa la sheegay in xiddigani uu muuqdo oo keliya saddexda xilli ee sanadka. Kuwani waa, inta badan, deyrta iyo jiilaalka oo laga daawan karo saldhigyada koonfuurta woqooyi. Si kastaba ha noqotee, xagaaga waxaa laga arki karaa koonfuurta koonfureed tan iyo Waa xiddig xiddig leh oo ay ka gudubto xiddigo kale oo dhalaalaya. Isla marka la fiirsado, waxaa macquul ah in la qiimeeyo labadiisa xiddig ee ifaya, kuwaas oo loo yaqaan Castor iyo Póllux. Labaduba waxay leeyihiin heer isku mid ah oo dhalaal ah waxayna hodan ku yihiin xiddigo, majaajillo iyo qurxinta qaar mudan in la fiirsado. Waa mid ka mid ah sababaha xiddigta Gemini ay u tahay mid ka mid ah burji ay leeyihiin dadka lagu tilmaamo inay yihiin madax-bannaanida iyo shaqsiyaadka.
Goobta iyo halabuurka xiddigta Gemini
Xiddigta Gemini waxay ku taalaa qiyaastii 30 darajo waqooyi-galbeed waqooyi-bari ee Orion, ugaarsade kooxeedka koonkan. Waxaa ka mid ah astaamaha sida aadka ah u soo jiita dareenka noocan xiddigta, waxaan ka helaynaa qaar ka mid ah kuwan soo socda:
Labada xiddig ee aadka u khuseeya ayaa ah kuwa ugu ifaya uguna muhiimsan. Lama garanayo magaca Castor iyo Póllux. Xidiggan labaad mahaddiis ayaa la helay meere ka baxsan meerayaasha qorraxda. Xiddigtuna waxay leedahay cufnaan xoog leh oo ka badan saddex jeer cabbirka meeraha Jupiter. Xiddiga Castor waxaa lagu takooray inuu yahay xiddig dhowr ah, oo ka kooban 6 qaybood.
Xiddigtaani waxay leedahay xiddigo cadcad oo aad u dhalaalaya qaar ka mid ah xilliyadeedii wareegga. Sidoo kale waa mid ka mid ah xiddigaha xiddigiska xiddigiska waana midka saddexaad ee ugu muhiimsan xagga tixgelinta.
Waxay ku taal qiyaastii 30 darajo waqooyi-galbeed waqooyi-bari ee Orion, koox ugaarsade ugaarsiga adduunka.
Quraafaadka xiddigiska Gemini
Waxaa la sheegay in magaca Gemini uu ka yimid wicitaanka laba mataano aad u xun oo ka soo horjeedda Castor iyo Póllux. Waxay badanaa u muuqdaan inay yihiin laba carruur ah oo qaawan oo yar. Fasiraadda kooxdan xiddigta ee quraafaadda Roomaanka, waxay ku abtirsadaan Romulus iyo Remus, waxay ahaayeen halyeeyaashii halyeeyada ee Rome xilligaas.
Mataanaha ayaa loo malaynayaa inay ka soo bexeen ugxanta Boqoradda Sparta, loona yaqaan Leda. Ka dib markii uu la saftay Zeus gobolka swan, Castor waxaa la dilay isaga oo yar, Póllux waxa uu u aarguday dhimashada walaalkiis. Xilliga Zeus uu u soo degay dhulka si uu u siiyo hadiyadda nolosha weligeed ah, Polux wuu diiday taas oo uu ku yiri ma doonayo inuu weligiis sii noolaado la'aanteed walaalkiis agtiisa. Sidaas darteed, Zeus wuxuu rabay inuu ka farxiyo Póllux oo wuxuu u ogolaaday inuu kala badalo boqortooyada ilaahyada iyo boqortooyada kuwa dhintay si uu u booqdo walaalkiis.
Si kastaba ha noqotee, Poseidon wuxuu mataanaha u rogay ilaaliyeyaal iyo hageyaasha badmaaxiinta, waana sababtaas sababta xiddigaha Polux iyo Castor had iyo jeer looga helo masraxa ama korkiisa.
Xiddigiska, Gemini waa mid ka mid ah calaamadaha dabaysha. Waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay mid ka mid ah xiddigaha ugu caqliga badan iyo falanqaynta falanqaynta Zodiac, maxaa yeelay laba madax baa ka wanaagsan mid keliya iyo xitaa intaa ka sii badan oo laba gebi ahaanba iska soo horjeedda dadka. Xiddigtaani waxay leedahay astaamo badan oo wanaagsan, halka kuwa xun ay yihiin kuwo xoog badan oo xag-jir ah. Is-jeclaysiga iyo shaqsiyadda shaqsiyadeed ayaa lagu muujin karaa astaamahooda xun. Marka laga hadlayo dadka togan, waa kuwo aad ufiican oo caqli badan, oo saameyn weyn ku leh deegaankooda iyaga oo leh awood weyn oo ay kula qabsadaan.
Calaamaddan waxaa ku badan Mercury, midka ugu caansan oo ah laba-fikir. Sababtaas awgeed, waxaa la siiyay awood xigmad ah, maxaa yeelay dadka ku dhasha calaamadaani waxay awood u yeelan doonaan inay si cad isu fahmaan. Si kastaba ha noqotee, dabeecadda sheyga ay ku badan tahay calaamaddani badanaa waa mid adag, aan caadi ahayn oo la beddeli karo. Waa dad aad u qurux badan oo edeb badan, faraxsan oo male awaal ah, waxayna inta badan ka faa'iideystaan ​​awoodda ay u leeyihiin waxa ay doonayaan.
Xiddigta Gemini waxaan ka heli karnaa waxa loogu yeero rucubyada xiddigta furan ama kooxaha galaxy. Kuwani waa kooxo xiddigo ah oo ka samaysan daruuro molikiyuuleel ah oo ku baahsan galaxyada.
Waa xiddigo aad u kulul oo isu soo uruuriya tiro aad u badan. Xirmooyinka xiddigta furan waxaa kaliya laga heli karaa galaxyada wareega. Waxay muhiim u yihiin markay baranayaan sameynta xiddigta Milky Way, maxaa yeelay xidigahan waa isku fac.
Xiddigta Gemini sidoo kale waxay leedahay qaabab loo yaqaan 'nebulae'. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna wacan qaabkeeda waa nekula Eskimo. Waxay leedahay magacan asalka ah tan iyo markii la arkay waxay umuuqataa wajiga qof madaxiisa daboolaya dabool, sida Eskimosku yeelaan.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto koox xiddigta Gemini iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Xiddigta gemini